Ndi soja akụọla onye ọrụ Dangote refinery ihe | odumblog
Ndi soja akụọla onye ọrụ Dangote refinery ihe
posted on Jul. 23, 2019 at 7:14 am
Onye ọrụ nke a na-akpọ Olamide Adekanmbi ekwuola na ndi soja abụọ kụrụ ya ihe n’ụlọọrụ Dangote Oil Refinery nke dị na Lekki Free Trade Zone na Lagos Steeti. A chọpụtara na ndi soja na ndi ọrụ nwere nsogbu n’ebe a na-arụ. Ụbọchị ha nwere nsogbu a, Adekanmbi abịaghị ọrụ.
Dịka Adekanmbi kwuru, ha nwere nsogbu a n’ụbọchị iri na asaa nke ọnwa Julai nke mere ka otu onye soja kụọ otu onye ọrụ ihe. Mgbe onye soja na-akụ onye ọrụ a ihe, ndi ọrụ ibe ya bidoro ịma ndi soja okwute.
N’echi ya, ka ọ bịara ọrụ, ndi soja họpụtara ya na mmadu abụọ ndi ọzọ wee kuwa ha ihe. Mkpu niile ọ na-eti na ya esoghi bụ ihe lara n’iyi. Ndi soja a kụrụ ya ihe nke metutara anya ya. Ka ọ dị ugbu a, Adekanmbi na-anara ọgwụ n’ụlọ ọgwụ.
Ọ gwara ndi ụlọọrụ maka ihe a merenu. E zigagoro ndi soja a ebe ọzọ. Onye nkwuchite ọnụ ndi soja 81 division bụ Olaolu Daudu gwara Adekanmbi ka ọ bịa hụ ha maka mkpesa a.
Tags:DangoteDangote refineryIgbo blogIgbo cultureIgbo NewsLekki free zonenewsin IgboOdum blogSoldier brutalizes Dangote worker
Onuorah Jennifer July 23, 2019
ỌJI: ka esi eleta ọbịa mgbe mbu na otu ọ dị ugbu a
Ndi na-achị ehi achụọ ndi nkuzi na ụmụakwụkwọ n’Ogun